प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ संसदबाट पारित – Health Post Nepal
प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ संसदबाट पारित
२०७५ माघ ११ गते १४:४१
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीचबाटै चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भई बहुमतबाट पारित भएको छ ।
प्रतिपक्षको नाराबाजीसहितको अवरोधका बीचमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पौडेलसुरुमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । सोलगत्तै उनले संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएर फटाफट विधेयक पारित गराए ।
चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसी १६औँ अनशनमा छन् ।
छलफलका लागि प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभामुखले बोल्नका लागि समय लिने माननीयलाई नाम लेखाउन आग्रह गरेका थिए । लगत्तै कसैले पनि नाम नलेखाएको भन्दै प्रतिवेदन विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सोलगत्तै उनले प्रस्तावना पढेर अन्य धाराहरू निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
अन्तमा सभामुखले विधेयक परित भएको घोषणा गरे । बैठकबाट बहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले पेलेर विधेयक पारित गराएको भन्दै संसद्को अवरोध जारी रहने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोध रहँदा पनि सत्तापक्षले छलफलको सामान्य प्रयास पनि नगरेको भन्दै यसले कम्युनिस्ट सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गरेको बताए । देउवाले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखले समेत आफ्नो पदअनुरूपम आचरण नदेखाई एकपक्षीय रूपमा पेलेर लगेको र पदको गरिमा राख्न नसकेको बताए । यसविरुद्ध सदन र सडक दुवैबाट सरकारको प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
एउटा आफूनिकट व्यापारीको मेडिकल कलेजका लागि अनशनरत डा. केसी मरे मरुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले गरेको यो बलमिच्याइँले अब सरकार बलियो कि सरकार चलाउने व्यापारी बलियो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
लामो समयदेखि विधेयकको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो पक्षका बाहेक अरु कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कुरा आजको संसद्को पेलाइले प्रमाणित गरेको बताए । एउटा आफूनिकट व्यापारीको मेडिकल कलेजका लागि अनशनरत डा. केसी मरे मरुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले गरेको यो बलमिच्याइँले अब सरकार बलियो कि सरकार चलाउने व्यापारी बलियो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । थापाले सभामुखको विभेदपूर्ण कार्यशैलीको पनि आलोचना गरे । शुक्रबार कुनै पनि सरकारी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नगरिने व्यवस्थाविपरीत बैठकअघिको छलफलमा प्रतिपक्षलाई ढाँटेर सभामुखले विधेयक पारित गराएको उनको आरोप छ । सभामुख सरकारको आदेशपालक भएको उनले बताए ।
सत्तापक्षका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिपक्षलाई सहमत गराउन नसके पनि आज पारित भएको विधेयकले सबै समस्या हल भएको बताउँदै डा. गोविन्द केसीलाई अनशन छोडेर खुसीयाली मनाउन आग्रह गरे । उनले पारित चिकित्साशिक्षा विधेयकले नेपालका विद्यार्थी, व्यापारीलगायत सबैलाई फाइदा पुगेको र पैसा भएर पनि डाक्टर पढ्न नपाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए ।
डा. केसीको अनशन १७औँ दिनमा चलिरहँदा अनशनको मूल मागको ठिक विपरीत विधेयक पारित हुनुले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ ।